Barcelona Oo Sii Xoojisay Raadinta Weeraryahan Cusub Inta Lagu Jiro Suuqa January | Sanaagmedia — Warar Sugan
Barcelona Oo Sii Xoojisay Raadinta Weeraryahan Cusub Inta Lagu Jiro Suuqa January
Ku Biiristii Munir El Haddadi ee kooxda Sevilla ayaa kooxda Barcelona ka dhigay qaar si aad ah ugu baahan weeraryahan cusub xilli ayna kooxdu ku kalsoonayn xiddiga reer Brazil ee Malcom iyaga oo sii xoojiyay raadintii ay ugu jireen weeraryahan cusub inta lagu jiro suuqa January.
U jeedka kooxda ayaa ah in ay kooxda keenaan xiddig kooxda caawin kara inta ka dhiman xilli ciyaareedkan lana mid ah heshiiskii ay kooxda ku keeneen xiddiga daafaca ka ciyaara ee Jeison Murillo.
Luis Suarez ayaa lagu qasbay in uu ciyaaro ku dhawaad kulan kasta inkasta oo uu yahay 32 jir waliba dhaawac ka dareemayo jilibla.
Ernesto Valverde ayaa maamulka Barcelona u sheegay in uu u baahan yahay weeraryahan kale si uu ugu wada guulaysto horyaalka La Liga iyo Champions Leaue xilli ciyaareedkan.
Xiddiga kooxda Girona ee Cristhian Stuani ayaa ah xiddigii ugu dambeeyay ee diirada u fuula kooxda Barcelona xilli ay ku doorteen xiddiga khibrada uu u leeyahay horyaalka La Liga iyo waliba rikoodhkiisa fiican ee gool dhalinta.
Sidoo kale waxa Liiska ay kooxda Barcelona doonayso ku jira xiddiga Alvaro Morata, Olivier Giroud, Fernando Llorente, Harry Kane, Vincent Janssen kuwaas oo dhamaantood ah dookha Barcelona inkasta oo ayna helayn Harry Kane maadama ayna Tottenha fasixi doonin bartamaha xilli ciyaareedka.